iWatermark + -I-iPhone / iApple ye-Windows kunye ne-Windows 8 yoLwandiso kwiiProfayile zeWatermark | Plum emangalisayo
IWatermark + -i-iPhone / i-iPad App kunye ne-iOS 8 eyandisiweyo kwiifoto zeWatermark
UMHLA: Jan 13, 2015
Abaphengululi / abahleli abaneziqinisekiso kupapasho nceda uphendule kulo myalezo ukuba ungathanda ikhowudi yepromo yeWatermark +
IPrinceville, HI-Plum emangalisayo, LLC. Isakhono seWatermark sokwenza kunye nokusebenzisa ii-watermark ezibonakalayo ezingabonakaliyo okanye ezingabonakaliyo ukukhusela iifoto kunye neevidiyo zanceda ukuba ibe yinombolo yesi-5 kwii -apps ezili-100 eziphambili ze-iOS zonyaka. Iziphumo ezibhengezwe izolo 1/5/15 zinokufumaneka apha:
* nge-2 engabonakaliyo + 5 ebonakalayo = Iimpawu ezi-watermark ezi-7, isicatshulwa, isicatshulwa kwi-arc, imizobo, isiginesha, QR, imethadatha kunye ne-steganographic.
* Iskena sokutyikitya ukungenisa utyikityo lwakho okanye omnye umzobo njengew watermark. Sayina iifoto zakho njengabapeyinti bakudala.
ixabiso: $3.99 or Isilingo samahala.
IWatermark + njenge iOS 8 yokuhlela ifoto yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokujonga ngokuthe ngqo kwiApple yeApple okanye ezinye iiapp. IWatermark + sisicelo esiqhelekileyo esivumela ukusetyenziswa kwewotshi enye okanye ezininzi ngaxeshanye ukubukela iifoto ezizodwa. IWatermark + kuphela kwesicelo esineentlobo ezi-7 zeewark, isicatshulwa, isicatshulwa kwi-arc, umzobo, utyikityo, i-QR, imethadatha kunye ne-steganographic. Isicatshulwa esibhaliweyo sinokusebenzisa i-tag metadata kwaye sibe nokufikelela kwiifonti ezingama-262 ngaphezulu nangayo nayiphi na enye insiza. Iimpawu zokubukela ezibonakalayo zivumela abasebenzisi ukuba bahlengahlengise isikali, i-opacity, ifonti, umbala, ibala, ubungakanani, indawo kunye ne-engile. Ngaphandle kwee-watermark ezibonakalayo ezi-4 kukho ii-watermark ezingabonakaliyo ezi-2 ezinokufaka iziqinisekiso zeefoto kwifayile kunye / okanye kwidatha yomfanekiso. Iimpawu zamanzi zinokwabelwana ngazo ngokupheleleyo kwi-Facebook, kwi-Instagram, kwi-Twitter, kwiAlbham yekhamera, kwibhodi eqhotyoshwayo okanye kwi-imeyile (iindlela ezintathu zokusombulula). I-Tumblr, iFlickr, iPineterest, i-Evernote, njl njl exhaswa nge-iOS 3 yokwandiswa kwezandiso.